Shiinaha XZWD dilaaga ah ee AWP (madal shaqada hawada) warshad iyo saarayaasha |Wanda
XZWD dilaaga ah ee AWP (madaxda shaqada hawada)
Beerta wax lagu dilo ayaa si weyn loogu isticmaalaa madal shaqada anteenada.Sababtoo ah madal shaqada anteenada oo leh miisaan fudud iyo cabbir is haysta, sida caadiga ah wax lagu dilo waxay isticmaashaa moodooyinka cabbirka yar ee 200 ~ 1000 mm.
Walaxda wax lagu laayo waxaa loo isticmaali karaa 50Mn ama 42CrMo,nooca inta badan waa 4 dhibcood kubbadda wax lagu garaaco.
Madal shaqada anteenada miisaankeedu fudud yahay iyo cabbirkiisa is haysta ayaa ka dhigaysa mid ku habboon in laga isticmaalo dugsiyada, kaniisadaha, bakhaarada iyo wax ka badan.Goobaha shaqada ee anteenada ayaa sidoo kale bixiya xalalka shaqada gudaha ee goobaha dhismaha ee waaweyn, sida kor u kaca sare, iyo sidoo kale inay ku fiican yihiin ujeedooyinka dhismaha iftiinka.
Meesha shaqada anteenada ayaa inta badan la isticmaalaawax dilid, iyo jihada hore iyo gadaalba waxaa lagu dooran karaa iyadoo loo eegayo baahida hawlgalka.Qaybta wax lagu dilo ee habka wax lagu dilo iyo goobta shaqada ayaa labadaba lagu rakibay taageerada wax lagu dilayo, taas oo ah, leexashada.Qalabka wadista waxa uu ku xidhan yahay miiska leexashada, waxa kale oo qalabka lagu rakibaa cidhifka hoose.Xirmada wax lagu gowracayo waxay ka kooban tahay rogid iyo kursi giraangireed oo si go'an ugu xiran fareemka.Habka wax lagu laayo waxa uu ka kooban yahay matoor-rogmi kara, matoor haydarooli ah oo cycloid ah, qalab yareeya gooryaanka, taageerada wax lagu dilayo, iyo qalabka wax lagu dilo.Giraanta dibadda ee xajinta wax lagu gowraco ayaa ku dheggan shafka, giraanta gudahana waxa ay ku xidhan tahay giraanta.Wareega matoorka cycloidal wuxuu wadaa wareegtada yareeyaha qalabka dixiriga, wareegga wareegga dixirigu wuxuu wadaa qalabka pinion ee ku xiran, iyo wareegga wareegga waxaa lagu gartaa ka-qaybgalka qalabka pinion iyo giraanta dibadda.
Hore: XZWD|Xidhadaha wax lagu dhufto ee fudud ee mashiinka wax lagu duubo
Xiga: Gaariga Bambada Isku-dhafka Labeenta ah ee La Adeegsaday Qaadashada Fargashiga
2. Waxaan nafteena u hurnay R&D ee wax-dilid la habeeyey oo leh sax sare, ujeeddo gaar ah iyo shuruudo.
dilida madal shaqada anteenada
dilaaga ah ee AWP